विश्वका १८५ मुलुकमा कोरोना भा’इरस – कतिको मृ’त्यु, कति संक्रमित ? – Life Nepali
विश्वका १८५ मुलुकमा कोरोना भा’इरस – कतिको मृ’त्यु, कति संक्रमित ?
काठमाडौँ । विश्वका १८५ मुलुकमा कोरोना भा’इरस (कोभिड १९) को संक्रमण भेटिएको छ । महामारीका रुपमा फै’लिँदै गएको कोरोना भाइरस संक्रमणका का’रण विभिन्न मुलुकका ११ हजार ४०२ जनाको मृ’त्यु भइसकेको छ । यस्तै, विश्वभरका २ लाख ७५ हजार ९९७ जनामा कोरोनाको संक्रमण भेटिएको छ भने ९१ हजार ९५२ संक्रमित सफल उपचारपछि घर फर्किएका छन् ।
चीनको हुबेई प्रान्तको उहान शहरबाट सुरु भएको कोभिड–१९ लाई विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले ‘वि’श्वव्यापी म’हामारी’को स’ङ्ज्ञा दिएको छ । चीनको वुहा’नमा पहि’लो पटक दे’खा परेको यो भा’इरस., अहिले विश्वभर, फैलिने क्रममा छ । ची’नमा, अहिलेसम्म ३ हजार २ सय ५५ ज’नाको मृ’त्यु भएको छ भने ८१,००८ जना सं’क्रमित भे’टिएका, छन् । चीनमा को’रोना ,संक्रमितको सं’ख्या दि’नप्रति दिन घ’ट्दै गएको छ । त्यस्तै, चीनमा मात्रै ७१ हजार ७ सय ४० जना संक्रमित पूर्ण उपचारपछि, घर फ’र्किएका छन् ।
अहिले चीनभन्दा पनि को’रोना प्र’भावित मु’लुक इटाली बनेको छ । कोरोना संक्रमणका कारण इटालीमा मात्र ४ हजार ३२ जनाको मृ’त्यु भइसेको छ । यस्तै, ४७ हजार २१ जनामा संक्रमण भेटिएको छ । त्यस्तै इरानमा १९ हजार ६ सय ४४ सं’क्रमित छन् भने १ हजार ४ सय ३३ जनाले ज्या’न गु’माएका छन् । को’रोना संक्र’मणबाट स्पेनमा १ हजार ९३, फ्रान्समा ४५०, अमेरिकामा २६४, बेलायतमा १७७, नेदरल्याण्डमा १०६, दक्षिण को’रियामा १०२, जर्मनीमा ६८, स्वीटजरल्याण्डमा ५६ जनाले ज्या’न गु’माएका छन् । वि’श्वका विभिन्न मुलुकमा भे’टिएको को’रोना सं’क्रमण नेपालमा भने भे’टिएको पु’ष्टि भएको छैन ।
Previous जो इटाली फर्कन चाहँदैनन्, भन्छन्- ‘यति बेला नेपालमै ठीक छ’
Next कोरोनाको महामारीपछि दिल्लीमा वृद्धभत्ता दोब्बर र गरिबलाई निःशुल्क खाना